पृथ्वी जयन्ती पुनर्जागृत गराउने प्रयास
डा. हीराकाजी मानन्धर बुधवार, पुस २७, २०७३ 2147 पटक पढिएको
आज पृथ्वी जयन्ती । मुलुकका विभिन्न भागमा विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी यो जयन्ती मनाइँदै छ र आधुनिक नेपालका निर्माता बडामहाराजधिराज पृथ्वीनारायण शाहको योगदानको स्मरण गरिँदैछ । यसर्थ पनि आजको दिन राष्ट्रप्रेमी नेपाली जनता पृथ्वीनारायणलाई सम्झनेछन् । मुलुक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेपछि राज्यस्तरमा पृथ्वी जयन्ती मनाउने क्रम रोकिएको छ ।विद्यार्थी कालमा हामीले पढ्ने गरेको पृथ्वीनारायण शाहप्रतिको सम्मान आज पनि उत्तिकै छ ।
स्कुले विद्यार्थी छँदा सुनेको थिएँ- गोरखनाथ बाबाले पृथ्वीनारायणको ११ पुस्तासम्मलाई राजा हुने आशीर्वाद दिएका थिए रे ! हुन पनि एघारौं पुस्तामै आएर शाहवंशीय राजतन्त्र सकियो । (१) पृथ्वीनारायण, (२) प्रतापसिंह, (३) रणबहादुर, (४) गीर्वाणयुद्ध, (५) राजेन्द्र, (६) सुरेन्द्र, (७) त्रैलोक्य (राजा नहुँदै बितेका), (८) पृथ्वी, (९) त्रिभुवन, (१०) महेन्द्र र (११) वीरेन्द्र ।
राजा वीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्र एउटै पुस्ताका हुन् । कसैले भन्लान्, युवराज हुँदै बितेकाले त्रैलोक्यलाई गणना गर्न मिल्दैन । हिसाब पुस्ताको हो, राजाको संख्याको होइन । कसैले भन्लान्- दीपेन्द्र पनि त केही दिनलाई राजा घोषित भए । त्यसले १२ पुस्ता भयो नि ! त्यसैबेला मरिसकेको विश्वास गरिएका दीपेन्द्रलाई केही दिन राजा घोषित गरेको मात्र हो, राजा भएर उनी गद्दीमा बसेका होइनन् । त्यतिखेर दीपेन्द्रलाई राजा घोषणा गर्नुको पछाडि कारण होलान् ।
गोरखाका राजा पृथ्वीनारायणले त्यसबेलाका बाईसी-चौबीसीलगायत नेपाल खाल्डोका तीन राज्य काठमाडौं (कान्तिपुर), पाटन (ललितपुर) र भादगाउँ (भक्तपुर) मा आक्रमण गरी विजय हासिल गरेका थिए । सीधा अर्थमा गोरखा राज्यको विस्तार थियो त्यो । पृथ्वीनारायणले पटकपटकको आक्रमणपछि विजयी ती राज्य आधुनिक नेपालमा मिलाएका थिए ।
कीर्तिपुरको लडाइँका क्रममा जित हात पारेपछि उनले शत्रुको पराक्रमलाई सम्मान गर्नुको सट्टा बदला लिए । त्यो उनको वीरता थिएन । लडाइँमा शत्रुको सामना गर्नु कर्तव्य र वीरता हो । पृथ्वीनारायणले विभिन्न ससाना राज्यमाथि बल प्रयोग गरेरै कब्जामा लिएका थिए, कूटनीतिक चाल र जनमत बटुलेर राज्यहरू गाभेका थिएनन् । अझ बलमात्र होइन, छल पनि गरेका थिए । इन्द्रजात्रा मनाइरहेको बेला काठमाडौंमाथि चारैतिरबाट आक्रमण गरेर कब्जामा लिएका थिए ।
एउटा कालखण्डमा काठमाडौं, पाटन र भादगाउँ र वरिपरिको भाग मिलेर एउटा राज्य बनेको थियो । त्यसलाई नेपाल खाल्डो भनिन्थ्यो । लिच्छवीकालमा नेपालको स्वरूप त्योभन्दा बृहत् थियो । बाह्रौं शताब्दीदेखि नेपाल खाल्डोमा मल्लकाल सुरु भयो । पन्ध्रौं शताब्दीको अन्त्यतिर यक्षमल्लले नेपाल खाल्डोलाई आफ्ना तीनवटा छोराहरूका लागि कान्तिपुर, ललितपुर र भक्तपुरमा टुक्रयाए । अर्थात् छोराहरूलाई शासन गर्न राज्य टुक्र्याएरु बाँडिदिए । सोह्रौं शताब्दीमा आएर मल्लकाल समाप्त भएको थियो ।
विश्व इतिहास हेर्दा र पढ्दा त्यसबेला एकले अर्कोमाथि आक्रमण गरेर आफ्नोमा गाभ्ने एउटा अभियानै थियो । राजाको कर्तव्य र धर्म पनि त्यही थियो । जसले त्यसो गर्न सक्थ्यो, ऊ पराक्रमी र चक्रवर्ती मानिन्थ्यो । यो भारत वर्षलगायतका क्षेत्रमा मात्र होइन, विश्वका अन्यत्र पनि त्यही थियो । गुणगान र पराक्रमसहितको इतिहास जित्नेको लेखिन्छ । हार्नेको जहिले पनि अवगुणसहित बद्नाम मात्रै गरिन्छ ।
जर्मनीका हिटलर त्यसबेला विजयी भएको भए आज उनको दुर्गुण मात्र सुनिन्थ्यो होला । इतिहासले यो पनि देखाउँछ, लडाइँमा हारेर अरूको अधीनमा गइसकेका राज्य फेरि जितेर फर्काएका उदाहरण पनि छन् । तर त्यसबेला पृथ्वीनारायणले हराएका मल्ल राजाहरूलगायतले फेरि फर्काएर लिने चेष्टा गरेको खासै पाइन्न ।
अहिले विभिन्न कोणबाट पृथ्वी जयन्तीलाई पुनः र्जागृत गराउने प्रयास भइरहेको छ । केही दिनअघि मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा एकजना वरिष्ठ मन्त्रीले उक्त दिन बिदा दिनुपर्ने प्रस्ताव लगेका थिए । यसलाई सुखद सन्देशका रूपमा लिनुपर्छ ।
पृथ्वीनारायणले जेजस्तो महत्त्वाकांक्षा राखेर नेपाल जितेपछि भनेका थिए, 'मेरो सानो दुःखले आज्र्याको मुलुक होइन, सबै जातको साझा फूलबारी हो, सबैलाई चेतना भया ।' हो, उनले दुःख गरेकै हुन् । उनी आफ्नो ज्यानको बाजी थापेर एउटा सानो गोरखाको राजाबाट ठूलो नेपालको राजा बनेका थिए । त्यतिखेरको सानो नेपाल खाल्डोलाई ठूलो नेपाल उनैले बनाएका थिए । यसर्थ उनको देनलाई स्विकार्नैपर्छ ।
पृथ्वीनारायणपछिका राजाहरूको समय राज्य विस्तारमा बितेको थियो, तर बीचका राजाहरूको समय राणाहरूको कठपुतली भएर बित्यो । पछिल्ला राजाहरूको समय सक्रिय राजतन्त्र र प्रजातन्त्र (अहिले लोकतन्त्र) को खिचातानीमै बित्यो । अन्ततः नाटकीय ढंगले राजतन्त्र समाप्त भयो । त्यसका पछाडि बाह्य र आन्तरिक जेजस्तो खेल र षडयन्त्र भए पनि त्यतिखेर त्यसलाई धेरैले सहज रूपमा लिए ।
परिस्थितिलाई बुझेरै ज्ञानेन्द्र शाहले दरबार छोडे । त्यसलाई सबैले एउटा युगान्तकारी परिवर्तनको रूपमा लिए । राष्ट्रिय संस्थाहरूको नाम फेर्नेदेखि लिएर राजतन्त्रसँग जोडिएका राष्ट्रिय दिवसहरू हटाइए । तीमध्ये पुस २७ गते राष्ट्रिय एकता दिवसको रूपमा मनाउने गरेको पृथ्वी जयन्ती पनि हो ।
अहिले विभिन्न कोणबाट पृथ्वी जयन्तीलाई पुनर्जागृत गराउने प्रयास भइरहेको छ । केही दिनअघि मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा एकजना वरिष्ठ मन्त्रीले उक्त दिन बिदा दिनुपर्ने प्रस्ताव लगेका थिए । यसलाई सुखद सन्देशका रूपमा लिनुपर्छ । अहिले हामी पृथ्वी जयन्तीलाई लिएर विभाजित छौँ । तर हामीले के बिर्सनु हुँदैन भने हाम्रो मुलुक नेपाल हो, हामी नेपाली हौँ । आजको नेपाल निर्माणमा पृथ्वीनारायणको प्रमुख देन छ, त्यसको सूत्रधार उनै हुन् । यस आधारमा उनलाई सम्झनु सबै नेपालीको कर्तव्य हो ।
को बन्ला मुख्यसचिव ? 4514
मन्त्रीको डेरामै करोड खर्च 1855
उच्च अदालतका ९८ न्यायाधीशको सरुवा 1941
भक्कानिए देउवा र गच्छदार 4685
वाम गठबन्धनको चुनावी घोषणापत्र कांग्रेसविरुद्ध केन्द्रित 5981
यसरी छानौं तिहारमा शुद्ध खानेकुरा 435
यस्तो हुनुपर्छ प्रदेशको राजधानी 1818
जहाँ वर्षैभरि पुजिन्छन् कुकुर 3480
जागिरका लागि भाैतारिँदै सहिदपत्‍नी 364
समयमा काम नहुँदा सेवाग्राही हैरान 219
सालोको कुटाइबाट भिनाजुको ज्यान गयो 235
मुद्दा सुनुवाइ साढे नौ बजेदेखि नै 765
निगालो काट्ने क्रममा लडेर एकको मृत्यु 437
जबरजस्ती करणीको अभियोगमा पक्राउ 1055
टेलिकमले कात्तिकभर नि:शुल्‍क यूसिम बाड्‍ने 24124